Kulan lagu gorfaynayo xal u helidda laba ardaa oo dagaal ku dhex maray dhul daaqsinka miyiga Galkacyo oo Galkacyo uga furmay wufuud ka kala socota Puntland & dawlada federaalka ah. – Radio Daljir
Diseembar 10, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, Dec 10 – Waxaa maanta ka furmay magaalada Galkacyo shir balaaran oo ay isugu yimaadeen wufuud ka kala socotay Puntland iyo dawlada federaalka ah, maamulka gobalka Mudug, kan magaalada Gaalkacyo, nabadoono, ganacsato, culimaa al diin iyo waxgarad kale oo fara badan; waxaana ajandihiisu ahaa kala warqaadasho ku salaysan dadaaladii nabdeed ee gobalka Mudug iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dagaal laba ardaa oo oodwadaag ah ku dhex maray dhul saaqsinka miyiga ee gobolka.
Kulankan oo hor dhac u ah kulamo si wada jir ah loogu gorfaynayo nabadgalyada gobalka Mudug ayaa waxaa ka hadlay mas’uuliyiin kala duwan oo matalayay qaybaha shirkan ka qayb galay. Waxaa ay dhamaan muujiyeen ahmiyada ay siinayaan nabadgalyada deegaankan iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in la wada arko xeerada salkeeda wax ku jira iyo dhibaatadan soo noqnoqtay waxyaabaha aasaaska u ah, si loo helo qaabka ugu haboon ee nabada deegaankan loo wajihi karo.
Gudoomiyaha gobalka Mudug Axmed Cali Salaad oo kulanka daah furay ayaa tilmaamay ajandaha kulankani in uu yahay adkaynta nabada iyo gorfaynta dhacdooyinkii gobalkan ka dhacay. Wuxuu sheegay arrimaha ahmiyada weyn leh ee kulankan uu xambaarsanyahay in ay ka mid tahay dadaalkii nabada Gaalkacyo oo gaaray heer ay dhexdhexaadintiisa ka wayb galaan wufuud sare oo ka kala socota dawlada fedderaalka ah ee Soomaliya iyo dawlada Puntland, kadib markii dhibaatadu ay noqotay mid xalkeedu ay ragaadiyeen dad nabad diib ah oo dadka gobalkan ku dhex nool.
Inkasta oo kulnkani ay goobjoog ka ahaayeen wafdigii dhawaan magaalada Muqdisho ka Yimid ee uu Hogaaminayay R/wasaare ku xigeenka dawlada federaalka ah, ahna Wasiirka Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah Mudane C/weli Maxamed Cali iyo wafdigii kale ee ka Socday Dawlada Puntland oo uu ka mid ahaa Wasiirka Deegaanka iyo Dalxiiska Puntland Mudane C/qani Yuusuf Cadde, Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha Puntland, iyo la Taliyaha Dhinaca Amniga ee M/weynaha Puntland Gen. C/laahi Cali Mire Carays iyo Masuuliyiin kale ayaa Hadana wuxuu hadlaku u badnaa mid maamulka gobalka Mudug iyo wagaradkiisu ay uga warbixinayeen dhamaan arrimaha nabadgalyada ku teedsan ee gobalkan ka jira.
Xubno ka mid ah labadan wafti oo hadalo kooban shirkan ka jeediyay ayaa tibaaxay ajanduhu in uu yahay mid marka hore lagu kala warqaadanayo, islamarkaana kulamada soo socdo aad loogu daadagi doono dhamaan xaaladaha jira iyo qaababka ugu haboon ee loo wajihi karo iyada oo la muujinayo isku duubnaan guud.
Dhinaca kale, waxaa ay odayaashu tilmaameen in dhibaatooyinka gobalka ka jira ee amniga la xiriira in ay yihiin kuwo mudo badan loo taagwaayay mar walbana ay wax ka soo noqodaan qodobada iyo heshiisyada nabada ku qotoma ee arrinta Gaalkacyo laga gaaro, waxayna dhaliishaasi dusha uga tuureen dadka deegaan ahaanta ka soo jeeda Koonfurta Gobalka Mudug iyo maamulkooda oo nabada aan u bislayn.
Isku soo wada duuboo, kulankan ayaa noqonaya mid lagu daahfuray kulmo mudo badan qaadan doona oo lagu gorfaynayo habka ugu haboon ee loo wajihi karo colaad beeleedka iyo dagaalada joogtada ah ee ka dhaca dhul daaqsinka miyiga ee gobolka Mudug.